जस्तोसुकै जमेर बसेको पुरानो दिसालाई निकाली पेटको जिद्धी बोसो घटाउने अचुक घरेलु औषधी ►अति स्वस्थकर [पढेर सेयर गरौ] - Taja Khabar
जस्तोसुकै जमेर बसेको पुरानो दिसालाई निकाली पेटको जिद्धी बोसो घटाउने अचुक घरेलु औषधी ►अति स्वस्थकर [पढेर सेयर गरौ]
नियमित रुपमा दिसा नहुने, पेट फुलेर डम्मा हुने, पेटमा ग्यास जम्मा भएर बस्ने जस्ता समस्या हरेक व्यक्तिमा देखिने आम समस्या हो। जब हाम्रो पेट ठिक हुँदैन तब यस्ता अनेक समस्याहरु देखा पर्छन्। पाचन शक्तिको कमीले हुने यी र यस्ता समस्याबाट नै ठुलो समस्या निम्त्याउछ। चर्पी खुलेर नहुँदा पेट सम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्नुका साथै पेटमा बोसो जम्मा भएर बस्छ। यसको कारण विस्तारै मोटोपन बढेर जान्छ। शरीर भित्र जमेर बसेको विकार पदार्थ बाहिर खुलेर आउन नपाउँदा मोटोपन देखि कयौँ समस्या देखा पर्न थाल्छ। आज हामी पेटको चर्पीलाई नियमित रुपमा खुलाई पेटको बोसो घटाउने अचुक घरेलु उपचार विधि बताउन गइरहेका छौँ, जुन १०० प्रतिशत प्राकृतिक, प्रभावकरी र लाभदायी छ।
यो घरेलु औषधीको सेवनले हप्तौँ देखि जमेर बसेको दिसा खुलाई पेट सफा बनाएर वजन घटाउन मद्धत गर्दछ।
१. सुरुमा, एउटा बोउलमा आधा कचौरा सोँफ र आधा कचौरा धनियाँको दानालाई मिसाउने। यानिकी यी दुई सामग्रीलाई बराबर मात्रामा लिएर मिसाउने। मिसाईसकेपछी…
२. अब एउटा सफा कचौरामा एक चम्चा करी पातको पाउडर, तीन चम्चा सौफ र धनियाँको दानाको मिक्स्चर र दुई चम्चा सुकेको जीरा राखेर यी सम्पूर्ण सामग्रीलाई राम्ररी मिसाउने। त्यसपछि यी सामग्रीहरुलाई पिसेर पाउडर बनाउने। पाउडर बनाइसकेपछी
यो औषधी कसरी र कहिले सेवन गर्ने ?
एक गिलास मन तातो पानीमा एक चम्चा यो घरेलु औषधी मिसाएर सेवन गर्नुहोस्। यो औषधी अर्थात् मिक्स्चर पाउडरलाई दिनमा एकपटक जुनसुकै समयमा पनि सेवन गर्न सकिने छ। यदि दिउँसोको समयमा यो औषधी खानु परेमा दिउँसोको खाजा खानु भन्दा १ घण्टा पहिले सेवन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै रातीको समयमा खाँदै हुनु हुन्छ भने रातीको भोजन सुत्नु भन्दा २ घण्टा पहिले लिनु पर्छ र यस औषधीलाई सुत्नु भन्दा १० मिनेट अगाडी सेवन गर्नु होस्।
यो औषधी प्रयोग गर्ने अवधिमा फास्ट फुड र मिठाई खान कम गर्नु होस् । सके सम्म प्रशस्त पानी पिउनुहोस्। यो औषधी उपयोग गरेको केहि दिनमै जस्तोसुकै जिद्दी चर्पीलाई पनि निकाली वजन तीब्र रुपमा घटाउँछ । लगातार यसको सेवन गर्नाले २ हप्तामै भ्यात्ता परेको भुँडी स्लिम र चिटिक्क बनाउँछ।
हामिले https://thesunnp.com/archives/2723 बाट साभार गरिएका हौ । थप जानकारिका लागि thesunnp.com मा भिजिट गर्नु होस ।।
आज तिहारको दोस्रो दिन, नरके चतुर्दशी, कुकुर तिहार दर्सन सोरुप शेयर गर्नु होस ।
नयाँ फोन किनेर पुरानो छोरीलाई खेलाउन दिइन्, ६ महिनापछि छोरीको कर्तुतले होस उड्यो
नसोचेको सफलता पाउँन राति सुत्नु भन्दा पहिले यस्तो गर्नुहोस् ?
४ दिन सम्म सुत्नेबेला एक पोटी लसुन चपाएर सुत्ने गर्नुस यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस…
भखरै आयो नेपालमा नयाँ रोग आयो, कसरी बच्ने ? जनहितको लागि सेएर गर्नुहोला
छतबाट खसेर १६ वर्षीया छात्राको दर्दनाक मृत्यु – छतबाट खस्दा खस्दैको यस्तो डरलाग्दो दृश्य जुन एक एक भाइरल भयो